नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओमा कति पर्यो आवेदन ? –
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओमा कति पर्यो आवेदन ?
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओमा २ दिनमै करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलका अनुसार माघ २ गतेदेखि बिक्री खुला भएको आइपिओमा दुई दिनमै ९ करोड ९४ लाख ६ हजार ७४० कित्ता आइपिओ माग भएको हो ।
आज आइतबार ४:३० बजे सम्ममा ८ लाख २ हजार ७०८ ८ लाख २ हजार ७०८ जनाले शेयर खरिदका लागि आवदेन दिएको बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । कम्तिमा १३ लाख बढी आवेदन पर्ने सकिने अनुमान गरिएको देशकै इतिहासमा यो ठूलो आइपिओमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण देखिएको छ ।
बैंकले शुक्रबारदेखि जारी पूँजीको २० अर्ब रुपैयाँको ४० प्रतिशतले हुन आउने ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता आइपिओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । त्यसमध्ये १ लाख ६० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ ।
बाँकी ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता आइपिओका लागि भने सर्वसाधरणले आवेदन दिन पाउनेछन् । आवेदन दिने समय छिटोमा माघ ६ गते र ढिलोमा माघ १६ गतेसम्म तोकिए पनि मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेकाले छिटो समय अवधिमा बिक्री बन्द हुने निश्चित छ ।
ठुलो संख्यामा शेयर निष्काशन भएकोले आवेदन सबैले पाउने निश्चित बैंकको आइपिओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २ करोड कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
बैंकको उक्त आइपिओलाई इक्रा नेपालले ‘इक्राएनपी आईआर त्रिपल बी’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तयि अवस्था मध्यम रहेको, समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम सुरक्षित रहेको र मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको जनाउँछ ।
हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपिओ बाँडफाँटपश्चात बैंकको चुक्तापूँजी २० अर्ब पुग्नेछ ।
« प्रचण्ड– नेपाल पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा माथि हमला गर्ने तथा हुर्मत लिने काम गरे :प्रधानमन्त्री
सोलुखुम्बु र नेचा सल्यानको सिमानामा मिनि ट्रक दुर्घटना,३जनाको मृत्यु १जना घाईते »